I-100G QSFP28 Abavelisi | KwiChina i-100G QSFP28 iFektri kunye nabaXhasi
I-HUA-QS1H-3110D yi-100Gb / s Quad encinci yeFom-factor plugable (QSFP28) yemodyuli ebonakalayo. Inika ukwanda koxinano lwezibuko kunye nenkqubo epheleleyo yokonga iindleko. Imodyuli ye-QSFP28 epheleleyo yeduplex ebonakalayo inikezela nge-4 ezizimeleyo zokuhambisa kunye nokufumana amajelo, nganye inakho ukusebenza kwe-25Gb / s ngenqanaba ledatha eli-100Gb / s kwi-10km yefayibha yendlela enye.
HUA-QS1H3140D QSFP28 imodyuli yokuhambisa transceiver yenzelwe amakhonkco angama-100 eGigabit Ethernet ngaphezulu kwe-40Km yendlela enye yefayibha. Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka kusetyenziswa ujongano lwe-I2C, njengoko kuchaziwe yi-QSFP + MSA. Kwaye iyahambelana ne-100G 4WDM-40 MSA.
HUAQ100Z yenzelwe ii-80km izicelo zonxibelelwano ezibonakalayo. Le modyuli iqulathe umgaqo we-4-transmitter optical, i-4-lane receiver receiver kunye nebhloko yolawulo lwemodyuli kubandakanya i-2 yocingo lwangaphakathi lobuso. Imiqondiso yokukhanya iphindaphindwe kwifayile yendlela enye ngesihlanganisi somgangatho we-LC somzi mveliso. Umzobo webhloko ubonisiwe kuMzobo 1.
I-Sfp C ++, Umthumeli weXfp, IHuawei Qsfp +, Imodyuli yeFiber Optical, Ixabiso leHuawei Olt, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle,